Nyowani Microsoft Surface ine Android. Microsoft inoshanda pamwe neGoogle | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani yeMicrosoft Surface ine Android. Kanganwa Windows neLinux kernel
Diego ChiGerman Gonzalez | | Updated on 03/10/2019 18:30 | General, Noticias
MIcrosoft inoburitsa nhare yeApple, asi ichiri kubheja paWindows
Iyo nyowani Microsoft Surface Duo inounza Android seanoshanda system. Icho chitsva kudzoka kwekambani kumusika wekushandisa mushure mekuyedza kwayo kusabudirira kumanikidza Nokia neWindows. Zvisinei, kambani yaSatya Nadella haina kukanda mapfumo pasi nekuenderera mberi nekushandisa Windows.
Chinhu chitsva ndechekutiuye akazviita achibatana neGoogle, uye kuti inopeta terminal ine maviri skrini.
1 Iyo nyowani Microsoft Surface Duo. Izvi ndizvo zvatinoziva
2 Kanganwa Windows neLinux kernel
3 Zvakadiniko nemakomputa emakomputa?
Iyo nyowani Microsoft Surface Duo. Izvi ndizvo zvatinoziva
Iyo smartphone yakagadzirirwa se mudziyo une mawonesero maviri, imwe neimwe ye5,6 zvichiteerana. Iwo maviri akabatanidzwa nehurongwa hwe hinji dzinoitisa mukana wekutenderera anosvika mazana matatu emadhigirii. Izvi zvinobvumidza mushandisi kuzvishandisa mukugadzirisa kwakasiyana. Imwe yeiyi skrini inogona kutora pamusoro pekhibhodi basa, ichishandura iyo michina kuita mini laptop.
Mhedzisiro yekutanga yekubatana pakati peRedmond neMountain View ndeiya mafomu maviri anogona kumhanyisa panguva imwe chete. Ini ndinofungidzira ichave imwe pane yega yega skrini.
Iyo inoshanda sisitimu yekumavambo kweaya madhizaini ichave Android Pie 9, zvechokwadi yakashandurwa kuti ienderane nehunhu hwesimbi. Uye, ndinofungidzira, pachinzvimbo cheChannel, Karenda uye Gmail ichauya neEdge uye Outlook. Dai ndaida, Microsoft inogona kunge iine yayo yega chitoro. Muchitoro chepamutemo cheGoogle pane zana nemakumi mashanu ekunyorera yakasainwa nezvikamu zvakasiyana zvekambani. Pamwe chete ivo vanowedzera kusvika kumamirioni mazana mashanu kurodha pasi.
Uye kutaura nezve Hardware, processor ichava iyo Qualcomm Snapdragon 855 uye panguva ino haina kamera yekumberi. Kunyangwe izvi zvaigona kuchinja mune ramangwana.
Kana iwe uchida, iwe unogona kugadzirira tsamba yeMadzimambo Matatu, asi uchafanirwa kumirira kwenguva yakareba nekuti kutangwa kwemusika Ichave muna Zvita 2020.
Kanganwa Windows neLinux kernel
Chinhu chimwe chete chaive pachena. Ko zve Mahwindo neLinux kernel Yaingova pfungwa dzepfungwa rakanyorwa naSteven J. Vaughan-Nichols, iyo Computer World munyori.
Zvakaringana kuona zvimwe zviziviso zvechiitiko kuti uone kuti Microsoft inogona kushandisa imwe sisitimu yekushandisa kana vatengi vayo vachikumbira, asi Haasi kuzosiya basa zvakadarowo mumatunhu aanotungamira.
Pamutambo wekuratidzira, chimwe chigadzirwa chemaviri-screen chakazarurwa Iyo Surface Neo piritsi. Chii chinonzi iko kushanda kweSurface Neo? Windows 10x
Izvo ndezve Windows 10, mune imwe modular nzira, yakagadzirirwa maviri skrini uye akapetwa michina.
Uye ini ndinogona kukuvimbisa iwe kuti hwaro hweWindows 10X haisi iyo Linux kernel. NdiWindows Core OS (WCOS)
Windows Core OS iri mhedzisiro yekuedza kweMicrosoft yekumisikidza seti yezvivakwa muWindows kushanda pamhando dzakasiyana dzemidziyo. WCOS mubatanidzwa wezvikamu zveOneCore OS, iyo UWP / Web uye Win32 application mapakeji, uye iyo C-Shell compiler.
Uye, kana iwe uine chero mibvunzo. Vatungamiriri veMicrosoft vakavimbisa kuti chero nyowani mbiri-skrini uye yekupeta Windows chishandiso chakagadzirwa nevashandi veMicrosoft vakaita saDell, Lenovo, HP, Asus nevamwe Ivo zvakare vachamhanya Windows 10X.
Zvingave zvisina kujairika kuti Microsoft ishandise hwaro hwehurongwa hwavo hwekushandisa nharembozha uye voirasa padesktop. Pamusoro pazvose nekuti Windows Core OS inomhanyawo paHoloLens 2 uye Surface Hub 2X.
HoloLens 2 chishandiso chiri chaicho chinokubvumidza kushamwaridzana neMicrosoft gore masevhisi. Surface Hub 2X michina yakangwara yemakamuri emusangano.
Zvakadiniko nemakomputa emakomputa?
Chokwadi ndechekuti Microsoft inoda vashandisi ve desktop kuti enda kune gore. Vamwe vashandisi vakataura nezvekutsakatika kwe sarudzo yekushandisa account yemuno (ane data rakachengetedzwa pakombuta) uye zvakaitwa zvekumanikidzwa kushandisa account yeMicrosoft inoda kuongororwa kwepamhepo.
Kune rimwe divi, uye ini ndinogona kupupura kune izvi, Windows 10 inotanga kushandisa iyo Imwe Dhiraidhi gore rekuchengetedza sevhisi yemagwaro nekukasira kuitira kana iwe uine kunyorera.
Kune rimwe divi, iri kubvumira vashandisi kubva pasirese pasirese edza iyo Windows desktop desktop yemahara. Iri desktop rinoita kuti vashandisi vagone kuona Windows 7 uye gumi zvinoshandiswa, Hofisi 10 ProPlus, uye zvimwe zvinoshandiswa zvechitatu-bato nekumhanyisa zviri kure paAzure chaiwo michina.
Nezve izvi, pamusoro peMicrosoft account, unoda mutengi uyo anowanikwa neWindows, Android, Mac, iOS uye HTML 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo nyowani yeMicrosoft Surface ine Android. Kanganwa Windows neLinux kernel
Arch Linux 2019-10-01, yekutanga Arch vhezheni yekushandisa Linux 5.3